Enimpolo taona nisiam-piovana fa mbola velona hatrany ilay tranon-tsarimihetsika novelomin’ny fianakaviana tao Thailandy · Global Voices teny Malagasy
Enimpolo taona nisiam-piovana fa mbola velona hatrany ilay tranon-tsarimihetsika novelomin'ny fianakaviana tao Thailandy
MpanoratraThe Isaan Record
Voadika ny 16 Mey 2018 5:23 GMT
Vakio amin'ny teny Español, Ελληνικά, bahasa Indonesia, русский, 日本語, English
Nandalo fiovana maro tao anatin'ny enimpolo taonan'ny tantarany ny Det Udom Theater.
Ny lahatsoratra avy amin'i Jirasuda Saisom nasiam-panovana dia avy amin'ny The Isaan Record, tranonkalam-baovao mahaleotena iray ao Thailand, ary navoakan'ny Global Voices indray ho anisan'ny fifanarahana fifampizaram-baovao.
Nahafafa ny ankamaroan'ireo toeram-pandefasana sarimihetsika mahaleotena saika hita isan-tanàna ao avaratra atsinanan'i Thailandy ireo teathran-tsarimihetsika mitoetra any amin'ireo tsenambarotra isan-karazany. Saingy any amin'ireo tanàna antonontonony ao amin'ny faritra, mbola mahazo mpijery mahatoky hatrany ireo sinema mijoro samirery tahaka ny Det Udom Theater any amin'ny faritanin'i Ubon Ratchathani.
Miorina any an-tanànan'i Det Udom, tokony ho 30 kilaometatra atsimo atsinanan'i Ubon Ratchathani City, efa ho 60 taona izao no niasan'ity teathra tantanim-pianakaviana ity. Naorina tamin'ny taona 1959 ny efitra lehibe fandraisana vita tamin'ny hazo an'ilay teathra voalohany teo, mbola talohan'ny nampiroborobo ny fananganana teathran-tsarimihetsika tao Thailandy tanatin'ny taompolo 1960.
Nifampiresaka tamin'i Kittiphong Thiamsuvan, tompon'ny Det Udom Theater sady mpikambana teo aloha tao amin'ny parlemanta, momba ny tantaran'ny teathra sy ny fomba niavotany tena manoloana ny fifaninanana ifanaovana amin'ireo rojon-tsinema goavana ny The Isaan Record.
Azonao lazaina aminay ve ny tantaran'ny teathra?
Nanokatra ny varavarany ny teathran-tsarimihetsika tamin'ny taona 1959. Nantsoina hoe Det Udom Movie Theater izy tamin'ny voalohany. Noraisiko avy amin'ny raiko ny fitantanana tamin'ny taona 1987 ary novaiko ho Det Udom Mini Theater ny anarany. Rehefa nandray ny fandefasana sarimihetsika nomerika izahay tamin'ny taona 2013, dia nandray anarana vaovao indray izahay: ny Det Udom Theater.
Norafetina tamin'ny hazo misy valombalona vitsy (acier) ny teathran-tsarimihetsika voalohany. Nahitana seza 800 tamin'ny rihana roa ireo toeram-pijerena. Nisy ihany koa ny sehatra anaovana fampisehoana rindran-kira. Raha ny tamin'ny taona 1959, novidiana iray baht ny tapakila iray.
Tamin'ny taona 1997, nandrava ny teathra voalohany izahay ary nanangana iray vaovao nahitana efitra lehibe anankiroa fijerena sinema. Samy nahitana seza 170 ny efitra tsirairay ary namidy 30 ka hatramin'ny 40 bath ny tapakila.
Rehefa nifindra mankany amin'ny fandefasantsary nomerika izahay tamin'ny taona 2013, dia niakatra hahatratra ny 50 ka hatramin'ny 80 baht [tokony ho 1,50 ka hatramin'ny 2,50 dolara amerikana] ny tapakila.
Fony mbola iray bath ny fidirana, dia nahita mpijery 100 ka hatramin'ny 500 isaky ny fandefasan-tsarimihetsika izahay. Tany amin'ny manodidina ny taona 1987, mbola ambony kokoa ny salanisan'ny olona nanatrika fa ankehitriny izahay tsy mahazo olona mihoatra ny 100 isaky ny fandefasan-tsarimihetsika.
Nahoana no nihena ny isan'ny mpandeha sinema tao anatin'ny taona vitsivitsy izay?
Tsy tsara ny toe-draharaha ara-toekarena, ary tsy mandrisika ny olona hitsidika ny teathran-tsarimihetsika ny governemanta. Taloha, ohatra, nanolotra fijerena sarimihetsika maimaim-poana tahaka ny mpanjaka Naresuan na filma momba an'i Boddha ny governemanta. Miankina amin'ny mpitarika ny governemanta isaky ny vanim-potoana ihany koa ny fanolorany na tsia ny fijerena sinema maimaimpoana.
Nandova ny fihariam-pianakaviana avy amin'ny rainy i Kittiphong Thiamsuvan, ary nandray ny fitantanana tamin'ny taona 1987.
Ahoana no nahafahanareo niavo-tena tanatin'ny fifaninanana tamin'ireo orinasan-tsinema goavana?
Efa 59 taona eo ho eo izahay, mahafantatra anay ny olona ary tsara toerana izahay. izahay irery no teathran-tsarimihetsika eto amin'ny distrikan'i Udom Det. Any amin'ny 54 kilaometatra miala eto indray vao misy teathran-tsarimihetsika manaraka; iray amin'ny teathra Major Cineplex any amin'ny tsenambarotra izany.
Efa nanara-bolontany ny tsiro tadiavin'ny olona izay miovaova hatrany izahay. Izany no nahatonga anay nanova endrika in-telo ny teathra. Ny fianakaviana no mamelona ny fiharianay ary saika havana avokoa ny ankamaroan'ny mpiasa. Afa-manao ny raharaha isan-karazany indray miaraka ry zareo ka izany no mahatonga anay tsy voatery hitady mpiasa betsaka. Mitsitsy tokoa izany ary saika tsy manana fandaniam-bola amin'ny fampiasana olona izahay.
Ahoana ny fanaovanareo dokambarotra amin'ny sarimihetsika alefanareo?
Mampiasa fafana vita amin'ny hazo sy voaloko amin'ny lokorano izahay satria mbola azo ampiasaina indray ireny. Rehefa vita ny sarimihetsika iray dia afa-mandoko ho amin'ilay manaraka indray izahay. Tsy tianay ireny afisy lehibe vinyl ireny satria sady lafo no ariana fotsiny avy eo. Tsy afa-mampiasa azy ireny intsony izahay. Fa rehefa amin'ireny sarimihetsika tena malaza ireny izahay no tsy maintsy mampiasa ny afisy vita printy vinyl, tahaka ny Pee Mak Phra Kanong ohatra.
Ankoatra izany, manana kamiao mitondra tabilaon-dokambarotra sy fanamafisam-peo mampiroborobo ny sarimihetsikay amin'ny tanàna manodidina ihany koa izahay.
Efa nieritreritra amin'izay handray ny fitantanana ny teathra manaraka anao ve ianao?
Oh, tsy mieritreritra ny momba izany aho. Satria rehefa avy ny andro, haneho ny fiantraikany ny voa tsara izay nafafiko. Nahazo diplaoma avy amin'ny Fakiolten'ny Fambolena tao amin'ny Oniversiten'i Kasetsart aho ary nanampy olona tsy nitaky tambiny.
Saika mitentina 100 tapitrisa bath ny tany eto. Raha te-hampivelatra azy izahay aoriana, dia afa-manorina teathran-tsarimihetsika vaovao. Tsy ho sarotra izany, ary ho afa-mampiasa azy mandritra ny 70 taona manaraka izahay rehefa mandray ny fitantanana ny taranaka manaraka.
Saingy mbola manan-danja ny sinema tranainy, na dia tsy ahalafosana loatra aza. Raha manontany ianao hoe mbola mety hahazoana tombombarotra ve: Eny mazava loatra izany! fa tsy dia miraharaha zavatra tranainy loatra i Thailandy.
Raha miavo-tena ny firenena amin'izao fotoana izao, dia mila mieritreritra lalina ny olona. Mila mieritreritra ny mpitarika amin'ny fanomezana varavarana misokatra ho an'ny vahoaka, fa tsy mampiroborobo ny fangatahana hitady varavarana misokatra. Izany no izy satria miaina amin'ny hetram-bahoaka ny mpitarika [hehy.]